Hargeysa: Diyaarad Shimbiro Xanibeen | WAJAALE NEWS
Hargeysa: Diyaarad Shimbiro Xanibeen
May 15, 2019 - Written by Reporter:
Hargeysa (WJN)– Diyaarad ay leedahay shirkadda Air Arabia oo maalintii subaxnimadii Shalay 156 rakaab ah ka qaadi lahayd garoonka diyaaradaha Hargeysa ayaa waxa hakiyey Shimbiro gudaha u galay qaybo ka mid ah diyaaradda.
Diyaaradda ayaa markii ay ka kacday garoonka oo inyar ay hawada ku jirtay ayaa Duuliyihi diyaaraddu dareemay cilad jirta, waxaana uu markiiba si deg-deg ah dib ugu soo fadhiisiyay Garoonka Hargeysa ee Cigaal.
Khuburrada Diyaaradda ayaa markii dambe sheegay in Diyaaraddu bad-qabto, balse Rakaabkii ayaa diiday sida ay Wajaalenews u sheegtay mid ka mid ah Rakaabka diyaaradda raaci lahaa oo Cimrada u socotay.
Rakaabka ayaa saaka loo kala qaybiyay laba qaybood.
120 ka mid ah oo u socday in ay soo Cimraystaan ayaa saaka la saaray Diyaaraddii ciladda looga shakiyay, balse hadda la sheegay in ay bad-qabto, 36 kale oo u socday isu-tagga Imaraadka Carabtana waxa la saarayaa Diyaarad kale.